Fiasa fototra efatra an'ny kodiarana môtô
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-10-21
Fomba fiasa efatra an'ny kodiarana môtô 1. Tohano ny lanja sy ny enta-mavesatry ny vatan'ny fiara: tohano ny lanjan'ny vatan'ny fiara, ny mpiasa, ny valizy, sns. ny vatan'ny fiara, noho izany dia tena ilaina ny mitazona ny mety ...
Ny kodiarana Ruiyi dia adidy hiady amin'ny toe-javatra valanaretina
Tamin'ny taona 2020, nisy valan'aretina pnemonia voan'ny coronavirus nanerana ny firenena. Nandritra ny ady tamin'ny valan'aretina, ny kodiarana Ruiyi, izay marika manandanja eo amin'ny sehatry ny indostria, dia nampihatra ny andraikiny ara-tsosialy. Amin'ny alàlan'ny hetsika azo ampiharina toy ny famerenana mavitrika ireo mpamokatra ...
Ny kodiarana ririnina dia mitaingina ranomandry sy lanezy
Ho avy ny fahavaratra ary ho avy ny ririnina. Amin'ny andro ririnina mangatsiaka dia namoaka kodiarana ririnina mafana ny kodiarana Ruiyi: grandtrek sj8 ary grandtrek sj6 ho an'ny SUV, ririnina maxx02, ririnina Maxx ary dsx-2 ho an'ny fiara mpandeha, hiarovana ny mpanjifa amin'ny diany ririnina. Izao rehefa b ...
Tamin'ny 25 Aogositra 2017, orinasa mpamokatra milina Qingdao ruiyi co., Ltd. nahazo ny anaram-boninahitra "orinasa Internet + fanavaozana tamin'ny taona 2017 ″.
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-05-19
Tamin'ny 25 Aogositra 2017, orinasa mpamokatra milina Qingdao ruiyi co., Ltd. nahazo ny anaram-boninahitra "orinasa Internet + fanavaozana tamin'ny taona 2017 ″. Tamin'ny 25 Aogositra, “Fihaonana an-tampon'ny fanavaozana Qingdao Internet + 2017 2017 natolotry ny tambajotram-baovao Qingdao dia natao tao amin'ny birao iraisam-pirenena ...
Tamin'ny 15 aprily 2015, orinasa mpamokatra milina Qingdao ruiyi co., Ltd. dia nahazo ny "orinasa maodely folo voalohany ao amin'ny distrika vaovao amoron-tsiraka andrefana".
Tamin'ny 15 aprily 2015, orinasa mpamokatra milina Qingdao ruiyi co., Ltd. dia nahazo ny "orinasa maodely folo voalohany ao amin'ny distrika vaovao amoron-tsiraka andrefana". Ny orinasa dia mifikitra amin'ny filozofia momba ny kalitao aloha, ny mpanjifa aloha, mifameno ary mamorona fanambinana miaraka. Ny resea ...
Caster Wheel, Kodiarana PU, China Concrete Mixer, China PU Wheel, Sina PU Foam Wheel, Kamio mixer,